News On Media | Community Driven Development Project
Community Driven Development Project Just another WordPress site
Term Of Reference(TOR)
Operational Manuals And Reports
Annual report (April 2015 - March 2016)	Download INTEGRATED SAFEGUARDS DATA SHEET (English Version)	Download Environmental and Social Management Framework (English Version)	Technical, Cost Effectiveness and Sustainability Audit March 2016	News On Media	INVITATION TO QUOTE (ITQ) for Procurement of Goods: G 57- COMMUNICATION MATERIAL: RAIN COATS and BACKPACKS
INVITATION TO QUOTE (ITQ) THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT WISHES TO PURCHASE: COMMUNICATION MATERIAL: RAIN COATS and BACKPACKS The Department of Rural Development has received funding from the International Development Association (IDA) towards the cost of the National Community Driven Development Project, World Bank Grant No: H814MM, and intends to apply part of the proceeds toward payments under the Purchase ...	Read More »
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဝယ်ယူရေးဆိုင်ရာ မွမ်းမံသင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
၅-၆-၂၀၁၇ နေပြည်တော် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဝယ်ယူရေးဆိုင်ရာ မွမ်းမံသင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို (၅-၆-၂၀၁၇) ရက်နေ့ ပျဉ်းမနားမြို့မြောက်လွတ်ကုန်းသင်တန်းခန်းမတွင် ကျင်းပရာ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်စိုးက သင်တန်းအဖွင့် အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် သတ်မှတ်ထားသော ဝယ်ယူရေးလမ်းညွှန်ချက်များနှင့် ကမ္ဘာဘဏ်မှချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား အထူးအလေးထား ဆောင်ရွက်သွားကြရန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းနောက် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်ညိုညိုဝင်းမှ ပစ္စည်းများဝယ်ယူရာတွင် ပေးဆောင်ရမည့် အခွန်ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး တက်ရောက်လာသော သင်တန်းသားများအနေဖြင့် မိမိတို့သိရှိလိုသည့် အကြောင်းအရာများကို ဖုန်းဖြင့်လည်းဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းသို့ ညွှန်ကြာားရေးမှူး ဦးကျော်စွာအောင်၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဝယ်ယူရေးဌာနမှ စီမံကိန်း သင်တန်းဆရာ/ဆရာမများ နှင့် စီမံကိန်းမြို့နယ်(၂၇)မြို့နယ်မှ သင်တန်းသား/သင်တန်းသူ(၅၄)ဦး တက်ရောက်ကာ သင်တန်းကို(၅-၆-၂၀၁၇)၇က်နေ့မှ (၇-၆-၂၀၁၇)ရက်နေ့ထိ (၃)ရက်တာ ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။	Read More »
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း သုံးလပတ် အစည်းအဝေးကျင်းပ
၂၃-၃-၂၀၁၇ နေပြည်တော် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဧ။်ထောက်ပံ့မှုဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြှောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း သုံးလပတ် အစည်းအဝေးကို (၂၃-၃-၂၀၁၇)ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗန်းရှင်းဗဟိုဌာန(MICC II) Delegate Room ၌ ကျင်းပရာ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးခန့်ဇော် တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အမှာစကားပြောကြားရာတွင် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်နေသော မြို့နယ်အဟောင်းများအနေဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ကာလအတွင်း ပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်ကြရန်၊ မြို့နယ်အသစ်များအနေဖြင့်လည်း အမြန်လုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့် သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလအတွင်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ပြီးစီအောင်ဆောင်ရွက်သွားကြရန် မှာကြားခဲ့ပါတယ်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများဆောင်ရွက်ပြီးသည့်အခါမှာလည်း မြို့နယ်များအနေဖြင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအလိုက် ဌာနဆိုင်ရာများအာလုံးအားဖိတ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ စနစ်တကျလုပ်ငန်းများအပ်နှံသွားကြရန်၊ မြို့နယ်များ အချင်းချင်း တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များအချင်းချင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများအချင်းချင်း အဆင့်ဆင့်လုပ်ငန်းများ အပ်နှံသွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်ဒေသကြီး/ပြည်နယ်စီမံကိန်း တာဝန်ခံများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအား စီမံကိန်းအကြောင်းအသေးစိတ်သိရှိအောင်နှင့် အားလုံးက ...	Read More »
Technical Assistance Team Leader (Lead CDD and Training Specialist)
Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation Department of Rural Development (DRD) National Community Driven Development Project IDA Grant H814-MM Assignment Title: Technical Assistance Team Leader (Lead CDD and Training Specialist) (12 Months) Employment Contract with DRD Location: (1) position in each of (Kyunsu, Kanpetlet, Pinlebu and Ann) The Republic of the Union of Myanmar has received financing from the World ...	Read More »
Response to IFI Watch Report “How community-driven are CDD projects in Myanmar?” 31 August 2016 1.
1. On 26 August 2016, IFI Watch Myanmar releasedareport on the Myanmar National Community Driven Development Project (NCDDP). The Department of Rural Development (DRD), as the implementing agency for the NCDDP, welcomes this report and the continuing engagement by IFI Watch. However as IFI Watch Myanmar did not contact DRD to verify the claims made in the report, ...	Read More »
DRD Respond IFI Watch-2015
Resoonse of Department of Rura! Development to the Report of tFl Watch Mvanmar’on Communitv Driven Development Proiect in Namhsan Township. Shan State DRD_response_IFI_Watch Download here	Read More »
MM-NCDD IFI Watch- NAMHSAN
Verifying World Bank Claims About CDD A Report on the Namh Sam Township Project About this report This isaproduct ofaproject monitoring activity that was carried out by representatives of the IFI Watch Myanmar in collaboration with their local partner-members in the Namh Sam Township, Shan State. Using guide questions to enable structured and focused conversations and ...	Read More »
DRD Respond to IFI Report
DRD Report to IFI Report 2016-03-09 DRD Response to IFI Report final Download here	Read More »
How Community Driven are CDD Projects in Myanmar?
How Community Driven are CDD Projects in Myanmar? How community-driven are CDD projects in Myanmar (Report-Eng) http://cdd.drdmyanmar.org/eng/?attachment_id=756 Read More »
Prioritized townships of CDD project in accordance with the consultation meeting held in respective regions and states.
Prioritized townships of CDD project in accordance with the consultation meeting held in respective regions and states.	Read More »
Page 1 of 212	»	Project Overview
Community Driven Development Project Implementation Agency
Department Of Rural Development	Funding agency
World Bank	Amount of Project Funding IDA Grant USD 80 Million; IDA Credit 400 Million; Government of Italy 20 million euro; Government of Myanmar $30 million	Approval Date
November 1, 2012	Closing Date
November 30, 2021	Project Area
About over 60 townships home to7million people from 15 States and Regions including Nay Pyi Taw Territory National Community Driven Development Project in Myanmar Procurements	INVITATION TO QUOTE (ITQ) for Procurement of Goods: G 57- COMMUNICATION MATERIAL: RAIN COATS and BACKPACKS
Contract-Publication of Award-ICB G79 Motorcycles
INVITATION TO QUOTE (ITQ) for Procurement of Goods: G – 81 – Printed Items for Grievance Handling
Infrastructure/ Safeguards Assistant – Ref:(C.60)
TOR Procurement Officer TTA
TOR M&E and MIS Officer TTA
TOR For Procurement Officer _TTA_
TOR for TTA Team Leader Kanpetlet
TOR Finance Officer
Secretary – Ref:(C.49)
Finance Assistant – Ref:(C.57)
Senior Finance Assistant – Ref:(C.22.1)
Procurement Assistant – Ref:(C.58)
Communication Consultant – Ref:(C.61)
Auto CAD Trainer – Ref:(C.59)
G 59 – ITQ T-SHIRTS and CAPS – final with Bank NOL 10.03.2017
G 53- POSTERS -170314 – final with Bank NOL 10.03.2017
Quotation form for supply and installation of satellite equipment and high speed connection for3CDD township offices
Quotation form for 35 Diesel Generators
Request for quotation (Office equipment, Generator,Air conditioner, Water cooler, Plotter, Portable hard drive&UPS,Laptop computer and Camera)
TOR(C 79/2016) for National Infrastructure and Safeguards Assistants for State and Regional Level
TOR for Communication Specialist 2016
TOR for Gender Consultant 2016
TOR for Finance Assistant 2016
TOR for Senior Finance Assistant 2016
TOR for Training Expert 2016
ွှTOR for Township Technical Assistance Team,community facilitator, Technical facilitator, Program Adviser and International Specialists of CDD
Operation Manual ( Cycle 4)
Operation Manual (English Version)
Summary of Multi-Stakeholders Review Report
Audit Report (MM-2015-2016)
Technical, Cost Effectiveness and Sustainability Audit March 2016
2015 Multi-stakeholder Review Meeting Annual Report
Rural Water Supply , Sanitation and Hygiene Division
National Strategy for Rural Water Supply, Sanitation and Hygiene: WASH in schools and health facilities
Abbreviated Land Acquisition (Kawhmu Township)
Find us on Facebook	Site designed and developed by Communication Team (CDD)
Contents provided and maintained by Department of Rural Development, Ministry of Livestock, Fisheries and Rural Development